QISO CAJIIB AH: Lamaaniyaal U Dhashay Wadanka Masar Xiriir Jaceylna Ka Dhexeeyey Muddo 2 Sano Ayaa Kala Tagay Kadib 2 Todobaad Guurkooda, SABAB LAYAAB LEH.
Waxaa Qoray Maxamuud Jamuuni / Waxaa La Daabacay Sunday, 12 Nov 2017 16:52 PM / 1 Comment
Aduunyada sida aan lasocono wax walba waa la arkaa waxaana macquul ah in qof aad jeceshahay marka aad is heshaan kadibna aad kala tagtaan marka la fiiriyo dhaqankiina oo aan iskeenin marka aad guriga isla aadaan.
Sheekaadaan waxaa ay dhexmartay lamaaniyaal u dhasheen Masar kuwaas oo in ka badan laba sano is jeclaayeen balse ugu dambeeyn kala tagay kadib laba todobaad markii ay is qabeen.
Samaara waa gabar u dhalatay wadanka Masar waxaana ay nolosha la wadaagtay wiil ay isjeclaayeen laba sano , balse waa ay noolaan waayeen muddo 2 todobaad ah ayey wada noolaayeen.
Samara odeygeeda oo 31 sano jir ayaa qaba caado u gaar ah waxaa uu inta sameeyaa howsha guriga oo dhan sida inuu dharka dhaqo , inuu raashiinka kariyo, nadaafada guriga iyo wax walba oo howsha guriga ah.
Gabadha uu guursaday ma jirto wax ay qabato keliya waxaa ay iska dhex fadhisaa guriga iyada oo u baahan inay qabsato howsheeda guriga.
Samara waxaa ay sheegtay inay aad uga dhib qabto arintaan waxaana ay dalbatay inay u baahan tahay furiin.
‘’Waan is guursanay laba todobaad keliya ayaan wada joognaa , waxaana na dhexmaray 2 sano oo jaceyl ah , laakiin waxaan nacay qaabka uu u noolyahay sababtoo wax walba oo guriga ah isaga ayaa qabta.
‘’Seygeyga ama ninkeyga waxaa uu qabtaa howsha guriga oo dhan , waxaa uu xakameeyaa wax walba oo ku saabsan howsha guriga , kama hadlikaro, xitaa ma taabankaro TV-ga, xitaa kushiinka , ‘’ ayey hadalkeeda kusii dartay.
Samara ayaa inta aysan furiin dalban sodohdeeda u sheegtay waxyaabaha ay dareemeyso iyo dhibaatada ay ku sugan tahay waxaana ay sheegtay in arintaan ay arin aan lagu wada noolaankarin.
‘’Waa gabadha guriga isaga , aniga waan dhibsaday lanoolaanshihiisa, waxaan keliya isqabnaa laba isbuuc, xitaa caawinaad haa , balse howsha oo dhan ayuu qabanayaa.
Ugu dambeeyn gabadhii ayaa dacweysey seygeeda waxaana la wada aaday maxkamad.
‘’Ninkeyga xornimo iima siiyo howsha guriga , waxaan dareemaa inaan joogo hotel, ‘’ ayey Samara u sheegtay Maxkammada.
Kadib dood dheer maxkamadda ayaa go’aansatay in gabadha sida ay rabto loo sameeyo wiilkiina waa laga qaaday xeriga.
One thought on “QISO CAJIIB AH: Lamaaniyaal U Dhashay Wadanka Masar Xiriir Jaceylna Ka Dhexeeyey Muddo 2 Sano Ayaa Kala Tagay Kadib 2 Todobaad Guurkooda, SABAB LAYAAB LEH.”
Sefudiin Xabibullah udiin says:
Hadalkan mala rumesan karo xaqiiqatan